लेख > भगवानको अनुग्रह > अनुग्रह दुरुपयोग नगर्नुहोस्
परमेश्वरको अनुग्रहको दुरुपयोग नगर्नुहोस्
तपाईले यस्तो पहिले देख्नु भएको छ? यो एक तथाकथित काठ-निकल [--सेंटीम पीस] हो। अमेरिकी गृहयुद्धको दौडान त्यस्ता काठका चिपहरू सामान्य सिक्काको सट्टा सरकारले जारी गर्थे। सामान्य सिक्का जस्तो छैन, यीसँग कुनै वास्तविक मूल्य थिएन। जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था यसको स through्कटबाट गुज्र्यो, यसले आफ्नो उद्देश्य गुमायो। जे भए पनि तिनीहरूसँग वैध सिक्का जत्तिकै छाप र साइज भए पनि, कोही पनि जसलाई उनीहरूको स्वामित्व थियो उनीहरू जान्दछन् कि तिनीहरू बेकम्मा छन्।
उनले काठको निकेल अनुग्रहको बारेमा कुरा गरे "। यो अनुग्रहको एक रूप हो जुन लगातार पापलाई औचित्य बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो क्षमाको वरदान प्राप्त गर्न, वा भगवानलाई पश्‍चात्ताप गरेर, उहाँसँग सहायता माग्ने र प्रलोभनको प्रतिरोध गर्न र उहाँको शक्तिमार्फत परिवर्तन र नयाँ स्वतन्त्रताको अनुमति दिनको लागि उनीहरूलाई परमेश्वरलाई स्वीकार्ने कुराको सवाल होइन। अनुभवी। परमेश्वरको अनुग्रह एउटा सम्बन्ध हो जसले दुबैलाई स्वीकार गर्दछ र पवित्र आत्माको कामद्वारा हामीलाई ख्रीष्टको स्वरूपमा नयाँ बनाउँछ। भगवानले उदारतासाथ हामीलाई आफ्नो अनुग्रह दिनुहुन्छ। हामीले उसलाई क्षमाको लागि केहि पनि तिर्नु पर्दैन। तर उहाँको अनुग्रहलाई ग्रहण गर्नु हामीलाई प्रिय हुनेछ। विशेष रूपमा, यसले हाम्रो गर्व खर्च गर्नेछ।
हाम्रो पापले हाम्रो जीवनमा र हाम्रा वरिपरिका मानिसहरूको जीवनमा सँधै नतीजा ल्याउँछ, र हाम्रो हानीलाई पनि हामी बेवास्ता गर्दछौं। पापले हाम्रो भलाईको लागि सधैं आनन्दमय र शान्तिमय मित्रता र परमेश्वरसँगको स in्गतिमा बाधा पुर्‍याउँछ। पापले हामीलाई तर्कसंगत विचारधारामा पुर्‍याउँछ र आत्म-न्यायको लागि अग्रसर गर्दछ। अनुग्रहको अत्यधिक प्रयोग गर्नु परमेश्वरको उदार सम्बन्धमा स्थायी जीवनसँग असंगत छ जुन उहाँले हामीलाई ख्रीष्टमा सम्भव तुल्याउनुभएको छ। बरु, यसले परमेश्वरको अनुग्रहलाई ढकढक्याउँछ।
सबै भन्दा खराब यो हो कि सस्तो अनुग्रहले अनुग्रहको वास्तविक मूल्यलाई गिराउँछ, जुन ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा मूल्यवान चीज हो। येशू ख्रीष्टमा हामीलाई नयाँ जीवनले प्रदान गरेको अनुग्रह वास्तवमै यति अनमोल थियो कि यसको लागि छुडौतीको रूपमा परमेश्वरले आफैले आफ्नो जीवन दिनुभयो। यसको लागि उसले सबै कुरा खर्च गर्‍यो, र यदि हामी यसलाई पापको बहानाको रूपमा प्रयोग गर्यौं भने, यो काठको निकेलको झोलाको वरिपरि घुम्नु र आफूलाई लखपति भन्छौं।
तपाइँ जे गर्नुहुन्छ, सस्तो अनुग्रह लिनुहोस्! साँचो अनुग्रह यति असीम मूल्यवान छ।